Xaraashka kumbuyuutarka ee shirkadda → Jumlo • Soo saare • Qaybiyaha P&M
U bandhig shirkadaha
Maxay muhiim u tahay inala shaqeyso?
Waxaan nahay shirkad ku takhasustay iibinta iyo qeybinta xayeysiinta iyo dharka shaqada. Waxaan soo bandhignaa calaamadaynta dharka kaliya, laakiin waxaan sidoo kale lebisnaa dharka daabacaadda kumbuyuutarka iyo daabacaadda shaashadda.
Diiwaangeli shirkaddaada maanta oo hel qiimo dhimis soo jiidasho leh! >>
Shaqaalaheena uqalma ee leh sanado badan oo waayo aragnimo ah ayaa ku farxi doona inay ka caawiyaan iyo talobixinta xagga naqshadeynta iyo xulashada farsamooyinka sumadda ugu fiican. Waxaan khibrad ballaaran u leenahay harqaanka, goynta iyo qaabeynta wakaaladaha xayeysiinta iyo magacyada caanka ah.
Laga soo bilaabo 2003, waxaan bixinaynay adeeg tolid, goyn, dhejis iyo calaamadeyn. Waxaan leenahay qol tolmo u gaar ah iyo mashiinno lagu xiro. Waxaan haynaa noocyo kala duwan - in ka badan 6000 oo badeecooyin ah, dharka shaqada iyo dharka xayaysiinta oo ay ka helaan soosaarayaasha la aqoonsan yahay oo ah qiimo aad u soo jiidasho leh Waxaad ka iibsan kartaa labiska iyo adeegyada calaamadeynta labadaba (fadlan horay ula soo xiriir annaga oo tixgelin shakhsiyeed ah) websaydhkayaga www.pm.com.pl ama dukaankeena ku yaal Allegro "PRODUCER-BHP".
Qolkayaga tolidda wuxuu hubiyaa in badeecada aan soo saarno ay ka sameysan yihiin dharka ugu tayo sareeya oo leh tayo fiican oo shaqeyneysa iyo farsamooyinka midabaynta iyo dhammeynta. Waxaan awoodnaa inaan la kulanno qandaraasleyaasha aadka dalbaneysa annaga oo adeegsiga qalabka wax ku ool ah u adeegsan karno.
Waan dabacsan nahay - waxaan si dhakhso leh uga jawaab celinnaa baahida macaamiisha - xagga wax soo saarka iyo arrimaha rasmiga ah. Waxaan bixinaa adeegga daabacaadda iyo daabacaadda shaashadda labadaba alaabooyinka laga soo iibsaday dukaankeenna oo ay keeneen macmiilku. Intaa waxaa sii dheer, adoo iska diiwaangelinaya boggayaga internetka, markaad wax iibsaneyso, waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis dheeri ah amarka labaad.
Waxaan u nimid amar kasta si shaqsiyan ah, anagoo la soconayna dhaqan galkiisa marxalad kasta. Waxaan ku dhisnaa aaminaaddayada wada-xiriirka furan ee lala yeesho macaamiisha iyo daryeelka mihiimka ah ee xirfad-yaqaanka.
Dawaarka kumbuyuutarka - shaqsiyeyn qaali ah
Soo-saaridda noocyo kala duwan oo dhar ah - oo ay ku jiraan dharka takhasuska leh - ayaa qayb ka mid ah dalabkeenna ah. Iyada oo qayb ka ah iskaashiga, macaamiisheena ayaa sidoo kale hela suurtagalnimada isticmaalka adeegyo badan oo dheeri ah. Waxaan sidoo kale si firfircoon ugu shaqeynaa sidii aqoon isweydaarsiga xijaabka, kaas oo ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee aan ugu faanno.
Kombuyuutar gacmeed waa mid tayo sare leh, xarrago leh oo qaab waara oo lagu garto dharka. Adeegsiga tas-hiilaadka farsamo ee takhasuska leh, waxaan awoodnaa inaan sameysanno wax kasta, xitaa qaab aad u sax ah oo cabbir kasta oo dhar ah oo cabirkoodu yahay. Waxaan ku sameynaa codsiyada dhar-gashiga ee dhammaan noocyada dharka (polo shirts, t-shirts, dharka shaqada, dufanka, xarkaha, xarkaha). Nooguma koobna nooca dharka - warshaddeenu waxay leedahay dhar tolidda iyo qolka goynta, marka waxaan awood buuxda u leenahay tayada waxa aan kuu diyaarinay. Fursadaha ay ku bixiyeen aqoon-isweydaarsiga kumbuyuutarka ayaa faa iido weyn u leh shirkad u adeegta suuqa Polish ee dharka labiska iyo xayeysiinta.
Way na aaminayeen, iyo kuwa kale:
- 1daqiiqo Jacobs
- Sharafta Hantida
iyo kuwa kaloo badan. Inbadan oo aragayaga ah dukaan. Mashaariicdayadii hore waxay muujinayaan in aan loo eegin mashruuca, inaan awoodno inaan ku fulino amarrada si lagu kalsoonaan karo oo waqtigii loogu talagalay ah.
Daabacaadda shaashadda - calaamadeynta xayeysiinta
Waa mid ka mid ah qaababka ugu badan ee loo xusho calaamadaynta, oo annaguna aan awoodno inaan bixinno. Adeeggan ma aha oo kaliya waara oo wuxuu bixiyaa tayo aad u sarreysa, laakiin sidoo kale wuxuu si sax ah u muujinayaa palette midabka ee naqshad kasta oo garaaf ah. Thanks to tikniyoolajiyadeeda sare iyo saxda, waxaan awoodnaa inaan siino macaamiisheena tayada ugu fiican oo suurogal ah, labadaba markay tahay dharka laftooda, iyo sidoo kale astaanta iyaga ku dhegan, qoraallo daabacan ama sawirro. Iyada oo ay ugu wacan tahay is-waafajinta howlaheenna, ayaan waxaan gacanta ku haynaa guud ahaan geedi socodka abuurista mashruuc dhamaaday.
Gaarsiinta soonku waa yoolkeenna
Waxaan amarro siinaa macaamiisha ku dhaqan Poland oo dhan, iyo sidoo kale dibedda. Waxaan badeecada u rarnaa annaga oo adeegsanayna diritaanka DPD. Wixii amarro weyn ah, markii macaamiilku codsado, waxaan abaabulnaa gaadiid u tagnaa bakhaarka. Waxaan awoodnaa inaan iskaashi la yeelano amarrada joogtada ah qiime aad u fiican. Waxa kale oo suurta gal ah ururinta shaqsiyeedka xarunteenna Rawa Mazowiecka.